Latest Myanmar News - Page 216 of 237 - News & Media
ကင်းလွတ် ယူနစ် ၁၅၀ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်
လျှပ်စစ်မီတာခများကို ဧပရယ်လအတွက် ယူနစ် ၁၅၀ ကင်းလွတ်ခွင့် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါက ဧပရယ်လအတွက်အသုံးပြုသောယူနစ် စုစုပေါင်းထဲမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသော ယူနစ် ၁၅၀ နုတ်ပြီးမှ ကျန်သည့်ယူနစ်ကို လျှပ်စစ်မီတာခ တွက်ချက်ကောက်ယူရမည်ဟု မိမိကတော့နားလည်သိရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ အမေစုမှ ဧပရယ်အတွက် လျှပ်စစ်မီတာယူနစ် ၁၅၀ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဟု ကြေငြာချက်ကို နားထောင်ရသောအခါ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှ ပြည်သူများက လက်ရှိအစိုးရ၏ပြည်သူလူထုပေါ်ထားရှိသောမေတ္တာတရားကို ကျေးဇူးအထူးတင်ဝမ်းမြောက်လျှက်ရှိကြပါသည်။ သို့သော် တနင်္ဂနွေညနေက အိမ်သို့မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဓါတ်အားခတောင်းခံလွှာရောက်ရှိလာသောအခါ ဓါတ်အားခတောက်းခံလွှာကိုသေချာကြည့်မိမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ပြည်သူအများစုထံမှ စုစုပေါင်းသုံးစွဲထား‌‌သောယူနစ်ထဲမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသော ယူနစ်၁၅၀ ကို အရင်နုတ်၍တွက်မထားဘဲ သုံးစွဲယူနစ်စုစုပေါင်းကို အရင်တွက်ပြီးမှ ယူနစ်၁၅၀အတွင်း အနည်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်ဆောင်ရသော ၃၅ ကျပ် ၅၀ကျပ် ၇၀ကျပ် ၉၀ကျပ် ၁၁၀ကျပ် ထိ ၁၁၅၅၀ကျပ် ကိုနုတ်ပြီးတွက်ပေးထားပါသည်။ဒါပြည်သူအပေါ်ကိုထားရှိသောလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။ အဲဒီတော့ … Read more
သရက်စေ့ကို စနစ်တကျ ပျိုးထောင်နည်း
သရက်ချစ်သူမိတ်ဆွေအာလုံးမင်္ဂလာပါ ယခုလိုအခါမျိုးမှာ သရက်စတင်စိုက်ပျိုးမည့်သူဆိုရင်အကုန်အကျသက်သာ၍ နည်းလမ်ကောင်းဖြစ်စေသောသရက်အကြမ်းစေ့များကိုဘယ်လိုပျိုးထောင်မှာလဲ? ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်မလဲ? မည်မှလောက်ထိလုပ်ထားသင့်သလဲ? မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျနော်န့အတူဆွေးနွေးရအောင်ဖိတ်ခေါ်သော်လဲ မည်သူတဦးတယောက်မှဘာတခုမှပြောမလာသောကြောင့် ပြောပြချင်နေသောကျနော်ကတန်ဘိုးရှိစေမည့်အချိန်များ အလဟသမဖြစ်စေလို၍အကြမ်းဖျင်းလေးတင်ပြကြည့်လိုက်ပါ၏ဟဲးးးး သရက်ပင်ကိုစတင်စိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါကရည်ရွယ်ချက် ကောင်းဦးတည်ချက်ကောင်းဖြစ်ဘို့အထူးလိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်ရေရှည်တည်တန့်၍ အနာဂတ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်တန့်စေလိုသောစေတနာဆန္ဒနှင့်ပါ ဖောင်ဒေးရှင်း အုပ်မြစ်ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်မှသာ လှပသေသပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ရုပ်လုံးအသွင်ကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုဖော်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါမယ် ကုန်ကျစရိတ်အထူးသက်သာသောနည်းလမ်းနှင့်ခေတ်မီ အရေအသွေးမီ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီလာနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သွားနိုင်မည့် နည်းလမ်းအခြေခံကောင်းလေးတင်ပြပေးလိုက်ပါရစေခမျာ့ ၅လပိုင်း၆လပိုင်းအချိန်ကာလတွေမှာ မိမိဒေသမှာထွက်ရှိကျတဲ့သရက်အကြမ်းမျိုးများပေါင်းစုံကို လွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်ပါမယ် စားပီးသားအစေ့များသရက်အချဉ်ဖတ်ခုတ်သောနေရာမှရင့်သောအစေ့များအပင်အောင်ကြွေသီးများ လွယ်လွယ့်ကူကူအနီးစပ်ဆုံးရရှိနိုင်နေရာမှယူ၍ သရက်ပျိုးပင် ပျိုးလိုက်ပါကလွန်စွာမှကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ် အခြားမှဝယ်ယူလျှင် ကားခ သယ်ယူခကုန်ကျရိတ်တောင်ကျနိုင်မည်မဟုတ်သလို အချိန်ကုန် လူပန်းလဲသက်သာလာစေမှာမလွဲပါ သရက်အကြမ်းသီးများရလာပီဆိုရင် အလုံးမှာရှိသောအသားများကို ဒါးဖြင့်ဦးစွာလှီးပါ လှီးထားပီသောအစေ့များကိုရေမှာထည့် ဘဒပ်နှင့်တိုက်ဆေးပါ ဆေးပီးသားအစေ့၏နောက်ကြောကိုဒါးနှင်ရှပ်ပီးခုတ်ပါ ခုတ်ပီးခွာလိုက်ရင်သရက်စေ့အဆံကိုရလာပါမည် အစေ့အဆံမှာကပ်နေသော အမှေးပါးကိုခွာပစ်ရပါမည် ဒါဆိုအသင့်ပျိုးနိုင်သောအနေအထားရရှိပါမည် မြေပြင်မှာဘောင်နစ်ကိုပျိုးမလား? တစေ့တပင်တအိပ်စနစ်ပျိုးမလား? မြေပြင်မှာဘောင်စနစ်ကိုပျိုးမည်ဆိုလျှင် ဆွေးမြေ့သောမြေဆွေးနှင့်မြေဆွေးထု၃လက်မထုရိုရပါမည် ဘောင်အကျယ်၂ပေခွဲဘောင်အရှည်မိမိနေရာအလိုက်တစေ့နှင့်တစေ့၃လက်မခြား၍သရက်စေ့များကိုအခုံးလိုက် မှောက်လျှက်မြှုတ်ပါ မြေဆွေးအတွင်းသို၁လက်မခန့်သာမြှုတ်ရပါမည်မြေဆွေးလေးမျာလက်လေးနှင့်ဖြန့်၍ပါးပါးပြန်အုပ်ပေးပါ အစေ့ချထားသောဘောင်သို့ရေပါးပါးဖြန်းပေးပါ ဘောင်ပေါ်သို့ရေလောင်းသည့်အခါအဆင်ပြေမှုရှိရန်ကောက်ရိုးခြောက်မျက်ခြောက်ပါးပါးဖုန်းအုပ်ပါ … Read more
ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့၊အတည်ပြုလူနာ (၁၈၀) ဦးရှိ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၃) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၉၇)ခုတွင် – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့ရှိပါ။ ၂။ (၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၈၀) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်းများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား စစ်ဆေးမှုတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ (၂) ဦး (Case – … Read more
စိန်တလုံးသရက်သီးကို အတုလား အစစ်လားခွဲခြားတတ်ဖို့
စိန်တလုံးလားခါတော်မီလားခွဲခြားသိပါစေ စိန်တလုံးအတုတော့မရှိပါဘူး။စိန်တလုံးကဈေးကောင်းရတော့စိန်တလုံးမဟုတ်တဲ့ တခြားသရက်မျိုးတွေကိုညှပ်ရောင်းကြလို့စိန်တလုံးအတုဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါ။ မသိရင် စိန်တလုံးနဲ့တူတူပဲလို့ထင်ရတဲ့ ဒီသရက်သီးမျိုးနာမည်ကတော့”ခါတော်မီ”လို့ခေါ်ပါတယ်။စိန်တလုံးနဲ့အမြင်အားဖြင့်​တူတယ်ထင်ရပေမယ့်​ခွဲလို့ရပါတယ်။ ခါတော်မီသရက်မျိုးက အလုံးအရမ်းမကြီးဘဲစိန်တလုံးအလတ်ဆိုဒ်လောက်အရွယ်ဟာအကြီးဆုံးပါ။ စိန်တလုံးနဲ့ယှဉ်ရင်ခါတော်မီကနည်းနည်းရှည်ပါတယ်။စိန်တလုံးကပုပုလုံးလုံးပုံစံရှိပါတယ်။ ခါတော်မီသရက်သီးအညှာဟာကလေးတွေချက်စူနေသလို အပြင်စူထွက်နေတတ်ပါတယ်။(စိန်တလုံးမှာတော့အညှာရင်းကအတွင်းချိုင့်ဝင်နေတတ်ပါတယ်) အညှာပိုင်းနမ်းကြည့််ရင်​အနံ့ကစိန်တလုံးလောက်မမွှေးတတ်ပါဘူး။ အရသာကတော့စိန်တလုံးနဲ့အတော်တူပါတယ်။ ခါတော်မီဟာလည်းမြန်မာမျိုးရင်းပဲဖြစ်ပြီးသူ့အရသာနဲ့သူစားကောင်းတဲ့အသီးပါ။ ဒါပေမယ့်​စိန်တလုံးဆိုပြီးဈေးကြီးပေးဝယ်လိုက်ကာမှအတုမိပြီးရင်ခံနေကြမစိုးလို့ဗဟုသုတအဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. ခရစ်ဒစ် Unicode စိနျတလုံးလားခါတျောမီလားခှဲခွားသိပါစေ စိနျတလုံးအတုတော့မရှိပါဘူး။စိနျတလုံးကစြေးကောငျးရတော့စိနျတလုံးမဟုတျတဲ့ တခွားသရကျမြိုးတှကေိုညှပျရောငျးကွလို့စိနျတလုံးအတုဆိုပွီးဖွဈလာတာပါ။ မသိရငျ စိနျတလုံးနဲ့တူတူပဲလို့ထငျရတဲ့ ဒီသရကျသီးမြိုးနာမညျကတော့”ခါတျောမီ”လို့ချေါပါတယျ။စိနျတလုံးနဲ့အမွငျအားဖွငျ့​တူတယျထငျရပမေယျ့​ခှဲလို့ရပါတယျ။ ခါတျောမီသရကျမြိုးက အလုံးအရမျးမကွီးဘဲစိနျတလုံးအလတျဆိုဒျလောကျအရှယျဟာအကွီးဆုံးပါ။ စိနျတလုံးနဲ့ယှဉျရငျခါတျောမီကနညျးနညျးရှညျပါတယျ။စိနျတလုံးကပုပုလုံးလုံးပုံစံရှိပါတယျ။ ခါတျောမီသရကျသီးအညှာဟာကလေးတှခေကျြစူနသေလို အပွငျစူထှကျနတေတျပါတယျ။(စိနျတလုံးမှာတော့အညှာရငျးကအတှငျးခြိုငျ့ဝငျနတေတျပါတယျ) အညှာပိုငျးနမျးကွညျ့ရငျ​အနံ့ကစိနျတလုံးလောကျမမှေးတတျပါဘူး။ အရသာကတော့စိနျတလုံးနဲ့အတျောတူပါတယျ။ ခါတျောမီဟာလညျးမွနျမာမြိုးရငျးပဲဖွဈပွီးသူ့အရသာနဲ့သူစားကောငျးတဲ့အသီးပါ။ ဒါပမေယျ့​စိနျတလုံးဆိုပွီးစြေးကွီးပေးဝယျလိုကျကာမှအတုမိပွီးရငျခံနကွေမစိုးလို့ဗဟုသုတအဖွဈတငျပေးလိုကျပါတယျနျေျာ.. ခရဈဒဈျ
← Previous Page1 … Page215 Page216 Page217 … Page237 Next →